Yintoni okufuneka uyithathe kunye nesibhedlele sokubeletha umama kunye nosana
Impilo yabasetyhini Ukuzala
Bonke abafazi abaye bafumana ixesha lokuthoba kwiinyanga ezintandathu ukuya kwezixhenxe? baqale ukuzibuza umbuzo: uthathe ntoni nabo esibhedlele umama nomntwana? Yaye le ngxaki ayinakunikwa, kuba ukubeletha kunokuqala kuqala nangaphambi kwexesha elidlulileyo kwaye oku kufanele kube kuhle. Njengoko bethetha: "Ukuhlala kwiingxowa." Kodwa nangona yonke into ihamba ngayo wena kunye nomzimba wakho wezinja, ugibe lufanele luqokelelwe, kuba ngemizuzu yokugqibela ungakhohlwa into efunekayo.
Musa ukuthayipha izinto ezininzi kakhulu, ukuze ungagcini kwigumbi apho uya kulala khona. Kodwa akunandaba, ukuba ubalekile ukufaka into yakho esikhwameni sakho, unokwazisa izihlobo zakho malunga nale nto kwaye ziya kudlula izinto eziyimfuneko kuwe ngabasebenzi bezonyango.
Kodwa, ukwenzela ukuba kube lula kuwe ukuba uziqhelise kwaye ungalibali izinto ezibalulekileyo, ngaphandle kokuya kubakho kanzima esibhedlele, siya kukhumbula kancinci: into oyifunayo ukuyifumana esibhedlele kunyoko nomntwana wakho.
Ngoko, yintoni oyifunayo ukufaka kwiingxowa kuqala?
- Ingubo yokugqoka i-terry (ngokukodwa xa kufuneka ubelethe entwasahlobo okanye ekwindla - ngamanye amaxesha ngeli xesha kwindlu yokubeletha ayifaki ukufudumeza, kwaye imozulu isenokupholisa);
- ezimbini zombini zeesokisi eziqhelekileyo kunye neyesibini ezifudumeleyo;
- Iingubo ezimbini zobusuku (ukususela emva kokuzalwa ngokwakho, kuya kufuneka ukuba ulahlekelwe kuyo - kuya kuba yinto engcolileyo kwaye ayisoze yathatha ifomu layo lokuqala);
- iibra ezininzi ezikhutshwayo kunye nokuzimela phambi, oku kuza kubaluleka xa uncelisa. Ungathengela iibras ezikhethekileyo zokuncelisa, akudingeki ukuba ungabikho nto, kodwa kuphela inxalenye ephezulu ye calyx. Ukuba awunaso ixesha okanye ubalekele ukuthenga ibrasi yokutya - mayeza izihlobo zakho zizise iipasiti ezikhethekileyo kwi-wardrobe yokubeleka ibrabhu eqhelekileyo ukuze ubisi obuninzi kwiintsuku zokuqala aluyi kutshabalalisa zonke izinto zakho.
- Ngaphantsi kweengubo (thatha iincindi ngaphezulu, ngokuba ngezinye izikhathi i-lochia, eyabelwe emva kokubeletha, ininzi kakhulu-inokutshabalalisa ngaphezu kweyodwa iipenties, kwaye kwi-arsenal yakho imele ihlale ithathe indawo engaphantsi kweengubo zangaphantsi);
- Iifake ezimbini;
- isepha, mhlawumbi umntwana;
- unamathela kunye ne-toothbrush;
- ukupakishwa kwee-napkins;
- Amaski amaninzi;
- Ukuthuthwa kwamanzi nge-napkins (kufuneka bathathwe ngaphezulu, njengoko baya kuba luncedo kokubili xa bebeletha kwaye emva kwabo, banokudansa phantsi komntwana, ukuba awuyi kuceba ukusebenzisa i-diapers).
- iimpahla apho uza kubuya khona ekhaya, nangona ingazisa kunye nezihlobo ngosuku lokukhutshwa. Xa ukhetha izicathulo, gcina ingqwalasela yakho kwizicathulo ezincinci (okanye mhlawumbi ngaphandle kwayo - kuya kukhethwa).
- Iincwadi ezininzi kunye ne-crossword puzzles, ukuze kube yithuba lokubulala (emva koko, ezinsukwini zakuqala umntwana uswele kakhulu).
Awudingi ukuthatha naziphi na izixhobo, iigugu, iziqholo, iziqholo, nokuba kunjalo, kuwe ekhaya lokubeletha, awuyi kufuna izinto ezibiza apho. Ngaphandle koko, kwimeko yomsebenzi wewadi yokubeletha ingalahleka, ngoko akuncomeki ukuba uthathe into enje nawe. Kwaye ngaphandle kweminye into, iziqholo kunye neengqungquthela ziba luncedo olukhulu kumntwana osanda kuzalwa, kunye neengubo zangaphantsi ezibizayo kunye neengubo zobusika eziyingozi ngexesha lokubeleka okanye ngexesha lokutya.
Imigca emibini iya kunika ulwazi malunga nezihlangu apho uya kuba esibhedlele. Izindwendwe zasemakhaya, ezifudumeleyo, ezifudumeleyo, apho uya kusetyenziswa khona, kuya kufuneka zishiye ekhaya - ziyazithoba ngokuzithoba ukubuyela kwakho kunye nosana ezandleni zakho. Kufuneka izicathulo ezinokuthi zenziwe lula kunye ne-antiseptic, isikhumba esifanelekileyo okanye i-leatherette. Kwaye, ewe, ngaphandle kwezithende, sidinga i-sole.
Kumele ibe yimihla yamaski e-gauze. Baya kuba luncedo kuwe ngexesha oza kulondla okanye unakekele umntwana osandula. Inyaniso kukuba ezinsukwini zokuqala umntwana unobuthakathaka kwaye akanalo isistim somzimba sakhe, uyayifumana ubisi lukanina, kwaye kude kube ngoko uya kufuneka umkhusele ekudibanisaneni ne-microbes ngazo zonke iindlela. Ukubhinqa i-bandage kuwe kule nto kuya kunceda kakhulu. Sitshintsha rhoqo ngangokunokwenzeka. Ukukhutshwa kwe-disinfection, unokusebenzisa i-ironing (ukuba kwi-ward yokubeleka kukho insimbi, yeyona nto), okanye ukupheka. Kwaye kubaluleke kakhulu ukuba amabhanti e-gauze anendawo yawo - engekho ipokethi yengubo yakho yokugqoka kwaye ayikho ibhokisi yesibhedlele sebhedi yokulala, kodwa i-sachet ekhethiweyo efanelekileyo.
Ungakulibali ukuthatha iingubo zentsana, ekubeni ngexesha lethu umntwana unikezwa ngumama emva kokuzalwa kwaye unesigodi esisodwa. Uya kuyidinga: i-diapers, i-diapers ezilishumi ezincinci kunye ne-ten denser, mhlawumbi i-flannel, iiseti eziliqela zamaphiko, amadoda amancinci, iinqanawa, iisokisi kunye neefowuni. Ungalibali ukuthabatha iimpahla apho umntwana eya ekhaya. Apha ufuna ukukhokelwa yiliphi ixesha lonyaka uceba ukuzala. Ehlotyeni umntwana uthathwa emvulophu evulekileyo, kwenzeka kwi-calico. Kodwa ukuba le ntshukumo iya kwenzeka ebusika - bhetele ufumane imvulophu efudumele kwimfesheni yezimvu, ukuze umntwana, xa eqala ukudibana nesitalato, akazange abuyele ekhaya ngokubanda.
Ukuba awufuni ukukhusela umntwana kwi-diapers kwaye ufuna ukusebenzisa i-diapers - vumela izihlobo zakho zikulethele i-oilcloth kunye ne-diapers ezininzi ngangokunokwenzeka-enyanisweni, kwiinyanga zokuqala umntwana usoloko ehamba (malunga namaxesha angama-12 ngosuku). Kwaye akayi kuthanda elele emanzini amanzi!
Kwakhona kufuneka uvelise iimblawu ezincinane zeglavu zezingane - zibizwa ngokuba "izikratshi". Emva koko, umntwana emva kokuzalwa sele esineemarigold ezincinci, kwaye zikhula ngokukhawuleza. Ukunyakaza komntwana akuxilwanga kuyo yonke into-oko kutheni angakwazi ukuziqhafaza. Kwaye kwimeko encinci, ukukhangela kunokuhlala kumqondiso wobomi. Ukuthintela oku kungenzeki, kufuneka uhlale ubeka iimvumba kwi-crumb de uze ukwazi ukunciphisa amancinci amancinci akhe.
Kubalulekile ukuthatha nawe esibhedlele naluphi na ukhilimu womntwana ongasetyenziselwa phantsi kweephampers kunye nakubuncwane besikhumba. Emva koko, umntwana osandul 'uhlala esongelwa ngokukhupha, ingakumbi ukuba unina onyamekayo unamathela rhoqo. Kwaye i-cotton kufuneka igcobe ngekrimu ecocekileyo okanye ifafazwe ngamapulders okhethekileyo.
Kulo lonke uzuze kumava okubeletha intombi - kuba ziyazi kakuhle izinto eziya kunceda wena kunye nosana kule ndawo okanye ekhaya lokubeletha.
Ukuzalwa kokuqala kwahluke kweyesibini
Kutheni emva kokuzalwa kweenwele kuphuma
Ukunceda ekuzalweni kuza kwe-fitball
Ukuzalwa kwabalingani: kunye nokuchasene
Isigqibo sokwenza umntwana usana
Ziziphi izinto ezifunekayo esibhedlele sokubeletha kumama nomntwana
Kwiintsuku ezintathu esibhedlele kunye nosana
Isobho semifuno kunye nebheyari yeparele
U-Olga Buzovoi uzuza ngokuphindwe kabini kwi-hits yakhe, ividiyo
Iikaroti, iivithamini, ixabiso lesondlo
Yintoni onokuyilindela xa ubanga kumhlathi?
Indlela yokwahlula i-porcelain yaseTshayina
Ubusika: njani unokuchitha ixesha kunye nenzuzo?
Ubungozi bokuncelisa ingono
Chamomile kusuka ku daikon
Ukutya okunomsoco kunye neprobiotics enempilo
Ukutya okunempilo ekulahlekeni kwesisindo: amamenyu, iingcebiso kunye nemithetho
I-Sagittarius: i-horoscope yokuwa kwe-2013
Ukukhanyisa kwiinwele ezinobumnandi
Yintoni enxiba ngayo ingubo yesilivere?
Ukuphuhliswa kwabantwana ukusuka kwiminyaka emi-3 ukuya kweyesi-6